အိုင်းလိုင်နာ (EYE LINER) ကြောင့်ဘာတွေထိခိုက်နိုင်သလဲ ? ? ? – BaHuTuTa
November 7, 2020 admin Beauty, Fashion 0
အိုင်းလိုင်နာ (eye liner) သုံးတော့မယ်ဆိုရင် သိထားသင့်တဲ့ အချက် တွေကဘာတွေဖြစ်မလဲ
မျက်ခမ်းစပ် အတွင်းသား နဲ့ အပြင်ဘက် ကို အိုင်းလိုင်နာ ဆိုးတာက မျက်လုံး လေးတွေ ဝင့်ဝင့်ကြွားကြွားလေးနဲ့လှပနေစေဖို့ မိတ်ကပ်ပညာရှင်တွေ အသုံးပြုတဲ့ မိတ်ကပ်ဖန်တီးမှုတစ်ရပ်ပါ။
ဒါပေမယ့် အိုင်းလိုင်နာ ကို မျက်လုံး နဲ့တအားကပ်ပြီးဆွဲမယ်ဆိုရင်တော့ ရေရှည်မှာ မျက်စိ ကိုထိခိုက်မှုတွေဖြစ်လာစေနိုင်တာကို သိပ္ပံပညာရှင်တွေက တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အိုင်းလိုင်နာ ခဲတံ ကို မျက်ခမ်း အတွင်းသား မျာ ဆိုးတာက အိုင်းလိုင်နာ အမှုန်တွေကို မျက်စိ ထဲဝင်စေပြီး မြင်အာရုံဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်၊လို့လေ့လာမှုတစ်ရပ်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။
အိုင်းလိုင်နာ တွေမှာ များသောအားဖြင့် ဖယောင်း။အဆီ၊ဆီလီကွန် ဒြပ်ပေါင်း တွေနဲ့ သဘာဝ သစ်စေး လိုအရာတွေပါဝင်ထုတ်လုပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ပစ္စည်းေ၏ တွေကို မျက်ခမ်း မှာ အိုင်းလိုင်နာ ကိုကြာရှည်ခံစေဖို့အသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။
မျက်လုံး ကို ခိုးလိုးခုလုဖြစ်စေခြင်း
မျက်ခမ်း အတွင်းပိုင်းကိုရော အပြင်ဘက်ကိုပါ အိုင်းလိုင်နာဆိုးစေပြီး ၁၅ မိနစ်ကြာထားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ အိုင်းလိုင်နာမှာပါတဲ့ အမှုန်တွေရဲ့ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းကနေ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက် မျက်စိ ထဲဝင်သွားတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ အိုင်းလိုင်နာကို မျက်ခမ်းအတွင်းပိုင်းမှာ အသုံးပြုတာက မျက်ခမ်း အပြင်ဘက်မှာဆိုးတာထက် မျက်လုံး ထဲမှာ အလွှာပါးလေးတစ်ခုကွယ်နေသလိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဆိုပါတယ်။
အိုင်းလိုင်နာ မှာပါတဲ့ အမှုန်တွေက မျက်စိ ခြောက်သွေ့တတ်တဲ့သူတွေနဲ့ မျက်လုံး က အချို့ဓာတုပစ္စည်း တွေနဲ့ ဓာတ်မတည့်တာနဲ့ မျက်ကပ်မှန် တပ်သူတွေအနေနဲ့ မျက်ခမ်း အတွင်းပိုင်းမှာ အိုင်းလိုင်နာ ဆိုးတာက မျက်လုံးအတွင်းမှာခိုးလိုးခုလုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ မျက်လုံး တွေကျိန်းစပ်တာနီရဲတာတွေကိုလည်းဖြစ်ပေါ်ခံစားရစေနိုင်ပါတယ်။မျက်ခမ်းအတွင်းပိုင်းမှာ အိုင်းလိုင်နာဆိုးတာက မျက်စိ ရောဂါ တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
သက်တမ်းကြာနေတဲ့ အိုင်းလိုင်နာ တွေမှာ ဘက်တီးရီးယား တွေရှိနေနိုင်ခြင်း
သက်တမ်းကြာနေတဲ့ အိုင်းလိုင်နာ တွေမှာ ဘက်တီးရီးယား တွေပေါက်ဖွားနေနိုင်ပါတယ်။ အိုင်းလိုင်နာ ခဲတံကို ဆိုးခါနီးတိုင်း ချွန်ပြီးထိပ်ပိုင်းလေးကိုအနည်းငယ်ချိုးပေးတာက မျက်လုံး ထဲကို ပိုးကူးစက် ဝင်ရောက်ခြင်းမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
မျက်လုံး ထဲကို ပိုးတွေမဝင်ရောက်စေဖို့ အိပ်ခါနီးတိုင်း အိုင်းလိုင်းနာ တွေနဲ့ မျက်လုံး နားတဝိုက်မှာလိမ်းထားတဲ့ မိတ်ကပ်တွေကိုဖျက်ပစ်ပါ။အိုင်းလိုင်နာ ဆိုးနည်းမမှန်တာကလည်း မျက်လုံးကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
အိုင်းလိုင်နာ ကို သန့်ရှင်းအောင်ထားပါ။
အိုင်းလိုင်နာ နဲ့ မျက်လုံးအနီးတဝိုက်မှာ အသုံးပြုတဲ့ အလှကုန် တွေက ဝယ်ဝယ်ချင်းမှာ ဘေးကင်းပေမယ့် သေသေချာချာမထိန်းသိမ်းရင် အန္တရာယ်ရှိတဲ့ ဘက်တီးရီးယား တွေနဲ့မှိုပိုးတွေပေါက်ဖွားလာနိုင်ပါတယ်။ ထိုအလှကုန်တွေကို မျက်စိအနားတဝိုက်မှာအသုံးပြုမိမယ်ဆိုရင် မျက်စိ ထဲကို ပိုးဝင်ကူးစက်တာတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ အိုင်းလိုင်နာ ကနေ ပိုးကူးစက်တာေကြောင့် အမျိုးသမီး တွေမှာ အမြင်အာရုံ ခေတ္တ ဆုံးရှုံးသွားတာမျိုးဖြစ်ပေါ်ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
မျက်ခွံတွေက နုနယ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်း တွေဖြစ်သလို ဓာတ်မတည့်တာ၊ စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်းဖြစ်တာနဲ့မျက်လုံးအနီးတဝိုက်မှာ အခြားထိခိုက်မှုဗတွဖြစ်စေနိုင်တာကြောင့် အိုင်းလိုင်နာ အပါအဝင် မျက်လုံး ခြယ်သဖို့အတွက်အသုံးပြုတဲ့ အလှကုန်တွေရဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကို အရင်ဆုံး သေချာကြည့်ရှု့သင့်ပါတယ်။အိုင်းလိုင်နာနဲ့ မျက်လုံးခြယ်သတဲ့ အလှကုန်တွေအသုံးပြုတော့မယ်ဆိုရင် ဒီအချက်လေးတွေကို သတိထားပေးပါ။
မျက်လုံး ခြယ်သရာမှာအသုံးပြုတဲ့ အလှကုန် တွေကြောင့် စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်းဖြစ်တယ်လို့ခံစားရရင် ဆက်မသုံးပါနဲ့။ မသက်သာဘဲအချိန်ကြာမြင့်စွာခံစားနေရမယ်ဆိုရင်တော့ ဆရာဝန် နဲ့ပြသပါ။မျက်စိမှာကူးစက်ရောဂါ ခံစားနေရရင်ဖြစ်ဖြစ် မျက်လုံးတဝိုက်မှာ ကျိန်းစပ်တာမျိုးတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် မျက်စိခြယ်သတဲ့အလှကုန်တွေကို မသုံးပါနဲ့။ အနာပျောက်ကင်းတဲ့အထိ မသုံးဘဲနေပေးပါ။
လက်မှာရောဂါပိုးတွေရှိနေနိုင်တာကြောင့် မျက်လုံးကို လက်နဲ့ထိမိရင် ပိုးတွေ မျက်စိ ထဲဝင်ရောက်နိုင်တာကြောင့် မျက်လုံးကိုခြယ်သတဲ့ အလှကုန်တွေအသုံးမပြုခင်မှာ လက်သေချာဆေးပါ။မျက်လုံးတဝိုက်မှာအသုံးပြုမယ့် အလှပြင် ပစ္စည်း တွေကို သန့်ရှင်းအောင်ထားပေးပါ။
အလှကုန်တွေကို အခြားသူတွေနဲ့မျှမသုံးပါနဲ့။ အခြားသူတွေဆီကနေရောဂါတွေကူးစက်ခံရနိုင်ပါတယ်။အလှပြင်ပစ္စည်းတွေရော အလှကုန်တွေမှာပါ ဖုန်တွေကပ်နေတာမျိုးမဖြစ်အောင်သတိပြုပါ။သက်တမ်းကြာနေပြီဖြစ်တဲ့ အိုင်းလိုင်နာ တွေကို အသုံးမပြုပါနဲ့။ မျက်တောင့် ကော့ဆေး တွေကို ဝယ်ပြီး ၂ လကနေ ၄လအတွင်းပဲအသုံးပြုပါ။
ခြောက်သါားတဲ့ မျက်တောင့် ကော့ဆေး တွေကိုလွှင့်ပစ်လိုက်ပါ၊တံတွေးစွတ်ပြီးသုံးမျိုးတွေ ရေစွတ်ပြီးသုံးတာမျိုးတွေ မလုပ်ပါနဲ့။ ရေစွတ်တာကပိုးတွေကိုပေါက်ပွားစေနိုင်ပါတယ်။အလှကုန် တွေကို အပူချိန် ၈၅ ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက် အထက်မှာ မသိမ်းပါနဲ့။ အလှကုန် တွေကို အပူချိန်ပြင်းနေတဲ့ကားတွေထဲမှာ အချိန်ကြာမြင့်စွာထားတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
မျက်လုံး အလှခြယ် ပစ္စည်း တွေကို ခြယ်သတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ဖျက်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ် မျက်လုံး အတွင်းသားနဲ့ မျက်လုံးရဲ့အခြားနေရာတွေကို ထိခိုက်မိနိုင်တာကြောင့် ကားတွေနဲ့ ရွေ့လျားနေတဲ့အရာတွေပေါ်မှာမလုပ်ပါနဲ့။မျက်လုံး အတွက်အသုံးပြုဖို့ထုတ်ထားတာမဟုတ်တဲ့ အလှကုန် တွေကို မျက်လုံး အနီးတဝိုက်မှာအသုံးမပြုပါနဲ့။ lipliner ကို အိုင်းလိုင်နာ အဖြစ်အသုံးမပြုပါနဲ့။